Codsiga - Shiinaha Beihai Maro adag Co., Ltd.
1.Dhismaha & Dhismaha
Fiberglass wuxuu bixiyaa faa'iidooyinka xoogga sare, miisaanka fudud, iska caabinta gabowga, caabbinta ololka wanaagsan, acoustic iyo kuleylka kuleylka, sidaas darteedna waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa dhismaha iyo dhismaha.
Codsiyada: shubka la xoojiyay, darbiyada isku dhafan, daaqadaha shaashadda iyo
qurxinta, baararka birta ah ee loo yaqaan 'FRP', musqusha iyo musqulaha, barkadaha dabaasha, madax-madaxeedyada, dhalooyinka iftiinka iftiinka, marmarka FRP, albaabbada albaabka, iwm.
Fiberglass wuxuu bixiyaa faa'iidooyinka xasilloonida cabbirka, saamaynta xoojinta wanaagsan, miisaanka fudud iyo iska caabbinta daxalka, sidaa darteedna waa shey xulasho u leh qalabka kaabayaasha.
Araajida: meydadka buundooyinka, docks-ka, dhismayaasha dhismaha hareeraha, laamiga weyn iyo dhuumaha.
Fiberglass wuxuu bixiyaa faa'iidooyinka kuleylka korantada, iska caabbinta daxalka, kuleylka kuleylka iyo miisaanka fudud, sidaas darteedna aad ayaa looga doorbidayaa meelaha korantada & elektaroonigga ah.
Codsiyada: looxyada daabacan ee daabacan, daboolka qalabka korontada, sanaadiiqda gawaarida gawaarida lagu wareejiyo, qalabka wax lagu buufiyo, qalabka daboolka, qalabka mashiinka dhamaadka iyo qalabka elektarooniga ah, iwm.
4.Ciidanka u Adkeysiga Nadaafadda Kiimikada
Fiberglass wuxuu bixiyaa faa'iidooyinka iska caabbinta daxalka wanaagsan, saameynta xoojinta wanaagsan, gabowga iyo caabbinta ololka, sidaa darteedna waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa aagga kiimikada u adkeysiga daxalka.
Araajida: maraakiibta kiimikada, taangiyada keydinta, joogridyada kahortaga wasakhda iyo dhuumaha.
Marka la barbardhigo qalabka dhaqameed, alaabada muraayadaha muraayadaha leh waxay leeyihiin faa'iidooyin muuqda oo ku saabsan adkeysiga, iska caabbinta daxalka, iska caabbinta abrasion iyo adkeysiga kuleylka, waxayna la kulmi kartaa shuruudaha gawaarida miisaanka fudud iyo xoogga sare. Sidaa darteed, codsigeeda ku saabsan gaadiidka ayaa sii kordhaya.
Araajida: meydadka gawaarida, kuraasta iyo gawaarida xawaaraha sare leh, qaab dhismeedka, iwm.
Fiberglass-ka isku-darka la xoojiyay waxay leeyihiin faa'iidooyinka miisaanka fudud, xoogga sare, caabbinta saameynta iyo dib-u-dhaca ololka, kaas oo awood u siinaya xalal badan si loo buuxiyo shuruudaha gaarka ah ee aerospace field.
Araajida: Rasaasyada diyaaradaha, qaybaha aerofoil & dabaqyada gudaha, albaabada, kuraasta, taangiyada shidaalka ee kaabayaasha ah, qaybaha injiinka, iwm.
7.Eergy-badbaadinta iyo Ilaalinta Deegaanka
Fiberglass wuxuu bixiyaa faa'iidooyinka ilaalinta kuleylka, kuleylka kuleylka, saameynta xoojinta wanaagsan iyo miisaanka fudud, taas oo ka dhigaysa wax muhiim u ah tamarta dabaysha iyo injineernimada ilaalinta deegaanka.
Codsiyada: maraakiibta marawaxadaha daboolka iyo daboolka, marawaxadaha qiiqa, joomatarirada, iwm.
8.Ciyaaraha iyo Wakhtiga firaaqada
Fiberglass wuxuu bixiyaa faa'iidooyinka miisaanka fudud, xoogga sare, dabacsanaanta naqshadeynta sare, habsami u socodka, isku dheelitirnaanta khilaaf hooseeya iyo caabbinta daalka wanaagsan, sidaa darteedna waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa alaabada isboortiga iyo raaxada.
Araajida: Fiidmeerta kubbadda miiska, dagaallada (raketka badminton), looxyada taki, barafka barafka, naadiyada golf, iwm.